Mahandro amin'ny voninkazo dia aza manomboka aloha loatra - bilaogin'ny fianakaviana Fiainana
Mahandro amin'ny voninkazo dia aza manomboka aloha loatra
Ny fandrahoan-tsakafo miaraka amin'ny voninkazo dia toy ny fitsangatsanganana ary mamy amin'ny lela. Dandelion eo amin'ny loviao? Daisy ao amin'ny salady? Aiza no ahitanao izany? Tsara indrindra ao an-dakozia ho an'ny ankizy!
Aza manomboka mahandro amin'ny voninkazodia dia aloha loatra
Satria ny voninkazo dia tsy vitan'ny hoe matsiro ihany, fa tsara tarehy koa eo amin'ny lovia, ary, araka ny fantatra, miaraka aminy ny maso. Salama ihany koa izy ireo ary manandrana sakafo fotsiny.
Cooking with Wildflowers - Sary avy amin'i Jill Wellington amin'ny pixel
Fa ny voninkazo inona no azo hanina ary ahoana no hisorohana ny zanako tsy hieritreritra fa azony atao fotsiny ny mametraka ireo voninkazo tsara tarehy rehetra avy any an'ala sy an-tsaha ary ahitra ao am-bavany? Amin'ny farany misy ny thimble dia mandrahona ain'olona!
Amin'izay ny olana etsy ambony dia tsy tena atahorana rehefa mahandro amin'ny voninkazo dia tokony efa antitra ny zanakao alohan'ny hanombohany mahandro amin'ny voninkazo dia ao an-dakozia. Tokony ho fantany fa mihinana ny voninkazo sasany ary misy manapoizina be kosa.
Tsy afaka manome vanim-potoana marina ianao, satria mianatra sy mahatakatra haingana kokoa noho ny iray hafa ny zaza iray. Fa amin'ny ankapobeny, ny ray aman-dreny mahalala tsara ny zanany mba hahafahany manombatombana ny fotoana mety indrindra handrahoana voninkazodia!
Ho an'ny iray dia amin'ny taona faharoa amin'ny akanin-jaza izany ary ho an'ny iray hafa raha tsy manomboka ny fianarany. Ny fanontaniana manaraka dia izao: Aiza no hanangonana ireo voninkazo ary iza no azoko alaina?
Iza amin'ireo voninkazo no azo hanina?
Mazava ho azy fa mihoatra ny noeritreretinao azy. Azonao atao ny mampiasa ny voninkazo dandelion ho an'ny tantely rehefa mahandro amin'ny voninkazo dia (fa ny voninkazo ihany!), Ny voninkazo Nasturtium dia mandeha mahafinaritra ao amin'ny salady satria matsiro izy ireo, nefa azo ampiasaina ho haingon-tsakafo amin'ny lasopy rehetra. Ny Daisy dia manana tsiro voanjo izay lasa somary tart.
Toy ny vonin'ny nasturtium, ny daisy dia mandeha tsara amin'ny salady sy lasopy, nefa koa amin'ny quark. Na izany aza, raha tsy mahazaka fianakaviana daisy toy ny chamomile ianao dia tokony tsy hiala amin'ny daisies ny tananao, satria an'ity fianakaviana zavamaniry ity koa ity zavamaniry ity. Ho fanampin'izany, ny fihinanana tafahoatra dia mety miteraka fanaintainan'ny vavony, koa aza dia atao be loatra.
Ny hibiscus sy ny carnation dia azo asiana vatomamy mandritra ny fandrahoana amam-boninkazo ary atolotra amin'ny tsindrin-tsakafo mahafinaritra. Ny felana felam-boninkazo dia azo atao sarisary ihany koa na atao sirrup. Ny voninkazo marigold dia tsy mandeha tsara fotsiny amin'ny sandwich, fa amin'ny omelety na salady ihany koa. Mpihinana maso be ny ice begonias ary tsara tarehy amin'ny tarts voankazo!
Toy izany koa, voninkazo lavender: azonao atao ny mametaka ireo voninkazo ao anaty cubes misy ranomandry na apetaka ao anaty totohondry ho an'ny ankizy hahasarika ny masony na mba hanitra hanitra tsara kokoa! Zava-dehibe toy izany koa ny fahaiza-mamorona rehefa mahandro voninkazo dia toy ny doka fitandremana mahasalama! Afaka mahita fampahalalana marobe momba ny voninkazo fihinana amin'ny Internet ianao.
Tsy misy voninkazo eny amoron-dalana!
Raha mbola eo am-pitandremana fahandro miaraka amin'ny voninkazo dia mbola tsara indrindra ny hambolena ireo voninkazo kasainao hampiasainao. Izany dia miasa tsara indrindra ao an-jaridaina na eo amin'ny lavarangana. Fa na dia ao an-tanàna aza dia azonao atao ny mamelana ny felana iray na hafa eo am-baravarankely.
Ny voninkazo amoron-dàlana dia maloto matetika amin'ny tain-biby, ary mety hafangaro mora foana amin'ireo karazana poizina hafa izy ireo. Azonao atao ny mianatra manangona voninkazo maniry amin'ny fandrahoan-tsakafo any anaty ala na any anaty ala, kokoa amin'ny fitsangatsanganana ahitra mitarika.
Ao amin'ny zaridaina dia fantatrao izay nambolenao, fa eto koa, mazava ho azy, ny biby dia mety handoto ny voninkazo. Noho izany dia tokony hosasana tsara ianao alohan'ny hampiasana azy ireo. Ny fifangaroana Blossom ho an'ny fandrahoan-tsakafo miaraka amin'ny voninkazo dia avy amin'ny mpivarotra manokana na fivarotana fitaovana.
Mbola hahafinaritra kokoa ny zanakao raha samy mamafy voa ianareo avy eo mijery ny voninkazo miara-maniry ary farany mijinja. Izy io koa dia afaka manampy rehefa mahandro amin'ny voninkazo dia, avy eo ny salady salama dia hanandrana indroa aorian'izay!
Illusion Optical - Parallel na tsia
Pejy fandokoana Aza milomano lavitra | fisorohana
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 11. September 2020 16. Oktobra 2020 Sokajy freetime sy fanatanjahan-tena, fahasalamana sy sakafo mahavelonaKeywords Mahandro amin'ny ankizy, voninkazodia
indray Lahatsoratra taloha: Sexting - Tendriky ny virtoaly zanatsika
more Lahatsoratra manaraka: Fandrindrana amin'ny maso-maso - inona marina izany